क्यान्सरको औषधि निःशुल्क - Naya Aawaj
क्यान्सरको औषधि निःशुल्क
२८ चैत । ललितपुरकी अचला पोखरेललाई डेढ वर्षअघि फोक्सोको क्यान्सर भएको थियो । जीवनभर सेवन गर्नुपर्ने मासिक ६ लाख रुपियाँ बराबरको औषधि उहाँले पाटन अस्पतालद्वारा निःशुल्क प्राप्त गरिरहनु भएको छ ।
शल्यक्रिया गर्न नमिल्ने भएपछि उहाँले औषधि सेवन गर्न थाल्नु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमा मासिक २ लाख ८० हजार रुपियाँ बराबरको औषधि सेवन गरेकी थिएँ।” क्यान्सरको औषधि निःशुल्क पाउने भएपछि उहाँले राहतको अनुभव गर्नुभयो ।
पाटन अस्पतालका क्यान्सर रोग विभाग प्रमुख डा. अरुण शाहीले पाटन अस्पतालमा मासिक १० लाख रुपियाँसम्मको औषधि सेवन गर्ने बिरामी रहेको बताउनुभयो । डा. शाहीले नेपालमा २ हजार क्यान्सर बिरामीले निःशुल्क औषधि सेवन गरिरहेको बताउँदै उनीहरूले मासिक १५ हजारदेखि १० लाख रुपियाँसम्मका औषधि सेवन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले शल्यक्रियापछि पनि नियमित औषधि सेवन गर्नैपर्ने बताउनुभयो ।
क्यान्सर अति महँगो रोग हो जुन भारत, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड लगायतका देशमा गएर उपचार गराउनुपरेमा एक करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ । पाटन अस्पताल र भरतपुरकाे बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले क्यान्सरका रोगीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।